နိုဝင်ဘာလအတွက် Philips ပရိုမိုးရှင်းလေးလာပါပြီ ~ The ICT.com.mm Blog
နိုဝင်ဘာလအတွက် Philips ပရိုမိုးရှင်းလေးလာပါပြီ
ICT.com.mm မှာ နိုဝင်ဘာလရဲ့ နောက်ထပ် ပရိုမိုးရှင်းတစ်ခု လာပါပြီနော်…
အဲ့တာကတော့ တကိုယ်ရည်သုံး ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ Panasonic ရဲ့ Personal Care products တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်ပုံသွင်းမလား? မုတ်ဆိတ်ရိတ်မလား? မျက်နှာက အတွင်းပိုင်းအညစ်အကြေးတွေထိ ပြောင်စင်အောင် စက်နဲ့ သေချာ cleansing မလား? တကိုယ်ရည်သုံးတင်မက၊ တစ်မိသားစုလုံးပါ သုံးလို့ရတဲ့ Personal Care products တွေပါနော်…
ခု Panasonic ရဲ့ Personal Care products တွေကို ဒီနေ့ကစပြီး၊ ဒီဇင်ဘာလ (၅)ရက်နေ့ထိ Up to 13% ဈေးချပေးထားတာဆိုတော့…
သင့်လိုအပ်ချက်တွေ ဖြည့်ဆည်းဖို့ Panasonic ရဲ့ Personal Care products တွေကို ပစ္စည်းမကုန်ခင်၊ မြန်မြန်သာ မှာဝယ်လိုက်တော့နော်…
Shop here: https://www.ict.com.mm/panasonic-promotion/
Newer လုပ်ငန်းသုံး Laptop ကောင်း တစ်လုံးကို ရှာနေမယ်ဆိုရင်တော့ Huawei MateBook D 14 လေးရှိပါတယ်နော်
Older Fractal ရဲ့ Design Define C Tempered Glass casing ပရိုမိုးရှင်း ရှိပါတယ်နော်…